Waa maxay Xiddigle? Isha furan ee barnaamijka taleefanka IP | Laga soo bilaabo Linux
Waa maxay Xiddigle? Barnaamijka furan ee taleefanka IP-ga
Xaqiiqdii waad isweydiineysaa waa maxay calaamaddu. Mashruucan furan ee shirkadaha qaar noocyadooda kala duwan ay aad uga hadlaan, iyo sidoo kale qaar ka mid ah wakaaladaha dowladda iyo xarumaha wicitaanka ee telemarkers.
Runtuna waxay tahay, caannimadeeda si buuxda ayaa loo aasaasay, xitaa kaba sii daran xilliyada faafida, maadaama ay wax ku darsan karto faa iidooyin badan oo aan waxba ka jirin, maadaama ay gebi ahaanba bilaash tahay oo furan tahay.
1 Waa maxay IP PBX?
2 Waa maxay Xiddigle?
2.1 Maxay u tahay barmaamijka hogaaminaya aduunka?
3 Sidee Xiddigtu u caawin kartaa ganacsigaaga?
3.1 Faa'iidooyinka Xiddigaha
Waa maxay IP PBX?
Kahor intaanan bilaabin inaan sharaxo waxa ay Xiddigle tahay iyo waxa loogu talagalay, waa inaad marka hore ogaataa waa maxay badhanka taleefanka hadaadan wali ogayn. Hagaag, badalku waa wax aan ka badnayn taxanaha qalabka / softiweerka si loo dhigo dhamaan taleefannada xafiis, dhisme ama aag, sameynta xiriiro lala yeesho isticmaaleyaasha kala duwan.
Marka laga hadlayo tixraaca a Kabadhka IP-gaSi fudud waa isku mid, laakiin waxay adeegsan doontaa shabakadaha LAN iyo WAN, iyagoo adeegsanaya borotokoollada IP-ga si xiriir looga sameeyo. Taasi waa, halkii laga isticmaali lahaa shabakadaha taleefannada dhaqameed, adeegyada VoIP waxaa laga isticmaalaa internetka.
Hubaal inaad ku qasbanayd wac In ka badan hal mar maamulka dawlada, adeegyada caafimaadka, ama shirkadaha, halkaas oo ay kugu siiyeen sugitaanka inta wakiilku xor u yahay inuu ku caawiyo. Ama waxaa laga yaabaa inaad ka jawaabtay su'aalaha qaar kaaliyaha caaqilka ah oo markaa kuu gudbiyay waaxda ku habboon hadba baahidaada. Hagaag, nidaamkaasi waa saxan bedelka taleefanka ...
Waa maxay Xiddigle?
calaamad waa software bilaash ah oo furan oo loogu talagalay in lagu abuuro barnaamijyo isgaarsiineed, sida nidaamyada taleefanka ee IP, VoIP Gateways, serverka shirarka, iyo xalalka kale ee loo habeeyay shirkaddaada ama ururkaaga. Taasi waa sababta ay ugu adeegsadaan hay’ado, dawlado iyo shirkado badan.
Waxay ku jirtaa horumar joogto ah, sidaa darteed waa mashruuc aad u nool leh casriyeyn joogto ah iyo hagaajin. Waxaas oo dhan, waxay isu asaastay inay tahay mid ka mid ah matoorada waaweyn ee IP-ku-saleysan PBXs adduunka.
In kasta oo markii hore loo abuuray sidii softiweer loo beddelo, qaybaha kale ee lagama maarmaanka u ah sameynta nidaam isgaarsiineed oo dhameystiran oo xoog leh ayaa markii dambe lagu daray Maxaa intaa ka badan, Xiddigta waa la qiyaasi karaa, mid kale oo ka mid ah awoodaha haddii aad qorsheyneyso inaad la qabsato hay'adaha dhammaan noocyada cabbirrada. Laga soo bilaabo SMEs ee u baahan wax fudud oo la isku duwo wicitaanada socda iyo kuwa baxaya, illaa Xarumaha Wicitaanka ee ugu adag.
Si ka duwan nidaamyada taleefannada dhaqameed, looma baahna in la cusbooneysiiyo rakibidda qalabka qaaliga ah. Intaa waxaa dheer, horumariyeyaasheeda ayaa mas'uul ka ah soo bandhigida hagaajinta sanad kasta si nidaamku u baahan yahay dayactir ugu yar oo uu u xasilloon yahay sida ugu macquulsan.
Maxay u tahay barmaamijka hogaaminaya aduunka?
Xiddigtu maahan uun madal kasta, waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha sida aan horayba u soo sheegay. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto boodh ku saleysan mashruucan waana mid si buuxda u shaqeynaya. Sidoo kale wuxuu leeyahay muuqaalada taagan marka loo eego adeegyada kale ee la midka ah:
Shaqada duubo wicitaan otomaatig ah ama dalab ah, oo leh shaqooyin farriin casri ah.
Awood u leh wakiillada maxalliga ah iyo kuwa fog si ay u aasaasaan xaruntooda adeegga macaamiisha meel kasta oo adduunka ah.
Toos u shaqeeye soo dhaweynta iyo maaraynta wicitaanada soo socda.
Nidaam si loo sameeyo loona maareeyo safafka wicitaanka si wax ku ool ah inta udhaxeysa wakiilada la heli karo, adoo macaamiisha hakinaya isla markaana hakinaya.
Xaqiiqdii mid beddel weyn oo loogu talagalay 3CX marka la eego nidaamyada taleefannada PBX.
Macluumaad dheeraad ah - Bogga rasmiga ah ee Xiddigaha
Sidee Xiddigtu u caawin kartaa ganacsigaaga?
calaamad Waa farsamo aad u xiiso badan ganacsiga, xitaa haddii aad iskaa u shaqeysato. Xitaa waa ka sii badan tahay xilliyada safka faafa, maadaama ay ku siin karto faa'iidooyin badan si aad ula qabsato duruufaha cusub oo aad u sii wadato inaad u shaqeyso si caadi ah. Iyada oo aad ku beddelan karto kombuyuutarkaaga kombuyuutar aad u casriyeysan si aad u fududeyso gargaarka taleefanka ee macaamiishaada.
Sida aan kor ku soo sheegay, Xiddigta waxaa loo adeegsadaa dhammaan noocyada shirkadaha iyo hay'adaha. Laga soo bilaabo qaar ka mid ah kuwa iskaa wax u shaqeeya ee horay u isticmaala badhanka IP-ka, shirkadaha waaweyn sida IBM, Google, dawladaha, iwm. Xaqiiqdii, waxay horeyba u leedahay saamiga 18%, maadaama ay tahay il furan, bilaash ah, oo aad u awood badan.
Xiddigta xiddigtu waa mid ka mid ah nidaamyada leh howlaha ugu badan, la cabbiri karo, iyo mid ka mid ah kuwa ugu xasilloon. Iyo, sida ugu fiican oo dhan, waa la heli karaa dhufto ee kala duwan: GNU / Linux, macOS, BSD, iyo Windows.
Markii laga hadlayo a Isweydaarsiga taleefanka IP, ama IP PBX, waxaa loola jeedaa hal ama in ka badan taleefannada SIP (macaamiisha) iyo adeege kaas oo ah midka aad ku dhejin karto Xiddigaha kombuyuutarkaaga. Si kale haddii loo dhigo, nidaamku wuxuu lahaan lahaa labadan qaybood, hal dhinac oo ah softiweerka iyo dhinaca kale boosteejooyinka.
Marka taasi? Hagaag, aad ufudud, qaabkan waxaad kadhigi kartaa wicitaan gudaha ah adoo adeegsanaya a tusaha taleefanka / isticmaalaha ku jira shabakadda gudaha, ama sidoo kale wicitaannada dibedda ee loo maro VoIP. Qaabkaas, waxaad sameyn kartaa xarun wicitaan oo adiga kuu gaar ah si aad ugu adeegto macaamiishaada, u kala qaybiso wicitaannada soo gala waaxyaha ama shaqaalaha, iwm.
ka faa'iidooyinka nidaamkan ay hirgelisay Astreisk waa:
Te waxay fududeyn doontaa rakibidda iyo qaabeynta Khadka taleefankaaga, tan iyo markii lagu hirgeliyo softiweer, halkii laga isticmaali lahaa nidaamyo qalab qaali ah oo adag.
Xiddigta xiddigta sidoo kale waxay u oggolaaneysaa a maamul fudud iyadoo ay ugu wacan tahay isku xirnaantiisa fudud iyo mid dareen leh.
Keydinta muhiimka ah adoo adeegsanaya taleefanka VoIP halkii aad ka qaadan laheyd adeegyo qaali ah taleefoonada halkaasoo masaafada dheer ama wicitaanada caalamiga ah badanaa qaali yihiin.
Uma baahnid inaad wax ka beddel ku sameyso gurigaaga, booskaaga cusub ee shaqada, ama xafiiskaaga, ilaa looma baahna fiilooyin gaar ah.
Ahaansho cilladaysan, waxaad awoodi doontaa inaad ku darto macaamiisha (taleefannada) si waaxyo badan ama hawl wadeyaashu ugu biiraan shabakadda caawimaadda.
Maaddaama ay shaqadaada ka dhigayso mid aad u fudud oo kuu oggolaanaysa inaad wicitaannada soo mariso, aad u mariso hawlwadeenka oo bilaash ah had iyo jeer, iwm, waxay kaa badbaadin doontaa inaad gacanta ku wareejiso wicitaanka iyo wax weyn ka tari doonta wax soosaarka.
Xiddigta xiddigtu waxay oggoshahay isticmaalka taleefannada SIP, taas oo hagaajinaysa adeegsiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Waa maxay Xiddigle? Barnaamijka furan ee taleefanka IP-ga
Qoraaga Libreboot wuxuu u yimid difaaca Stallman iyadoo kuwa kale ay sii wadaan inay iska casilaan FOSS
Cusbooneysiinta cusub ee Manjaro Linux 21.0 horey ayaa loo sii daayay